Kayakairan Daily | कायाकैरन दैनिक || गन्थन :बेरंग तरंग – kayakairan.com
गन्थन :बेरंग तरंग
मेरो कोठाको भित्तामा एकतमास झुण्डिरहेको क्यालेन्डरका अनुसार होली आउन अझै दुई दिन बाँकी छ । प्रिय पाठक, म यो गन्थन लेख्न बस्दा होली आइसकेको छैन । तर, तपाईंले पढ्दा भने होलीका थप केही थान हेलिकप्टरहरुले ‘टेक–अफ’ गरिसकेका हुनेछन् ।
यही क्यालेण्डर जत्तिकै स्थिर थिएँ म पनि । पढाइको भित्तोमा एकतमास झुण्ड्याइराखेको थिएँ आफूलाई ।
चैतको पहिलो सप्ताह हो यो । मौसमले पनि होली आइरहेको आभास गराइराखेको छ । वासन्ती उन्मादमा मदमस्त नाचिरहेको छ हावा । यो हावा जस्तै चञ्चल त थिई ऊ । चञ्चल हावाले स्थिर क्यालेन्डरका पत्रहरु उडाइराखेको छ । उसले यसरी नै त मेरा दिलका पत्रपत्र उडाएकी थिई ।
गतवर्षको भन्दा अलि ढिलै आयो क्यारे यो वर्षको होली । योवर्ष झै त्यो वर्ष पनि होली ढिलै आएको थियो, चैतमा । ढिलै आएपनि कति चाँडै मेरो सपनाका रङहरु उडाएर लगेको थियो । त्यो अनहोली होलीले ।
होली आउन अझै दुई दिन बाँकी छँदै होलीसँग गाँसिएका यादहरु भने आइसकेका छन् । यादहरुलाई आउन कति हतारो हुन्छ है ? अझ कहिल्यै नआइदिए हुन्थ्यो जस्ता लाग्ने यादहरुलाई आउन त झन् बढी हतार हुँदोरहेछ ।
लाग्छ, उडिरहने हेलिकप्टरजस्तै हुन् यादहरु । ती हाम्रो मानसपटलको आकासमा हमेशा चलायमान हुन्छन् । अवतरण हुने अनुकूल ठाउँ भेट्नासाथ फुत्त जमिनमा झरिहाल्छन् ।
होली आयो । होलीसँगै जोडिएका त्यो वर्षका यादहरु पनि । होलीवाला हेलिकप्टरहरु हेलिप्याडमा सकुशल ल्याण्ड हुने क्रम जारी छ । त्यो वर्षको होलीवाला हेलिकप्टरचाहिँ ल्याण्ड नभइदिए हुन्थ्यो ! मेरो देशकोभन्दा पनि कैयौं गुणा बढी मेरो हृदयको आकाश असुरक्षित हुँदा पनि यो हेलिकप्टर किन ‘क्र्यास’ नभएको होला ?
हावा अलि सुस्त चल्न थालेको छ । हेलिकप्टरहरुको ट्राफिकलाई अलि मत्थर पार्न म कफी पिउँछु । कति तितो बनेको हो यो कफी ? उसको याद मिसिएर पो हो कि ! साँच्चै, ऊ किन केही पनि नभनेर फर्किई ? मैले पनि एक शब्द बोलिदिएको भए भइहाल्थ्यो नि ! उसले सोधेकी पनि त हो आखिर ? मैले जवाफ फर्काइदिएको भएपनि के नै बिग्रन्थ्यो र ! म किन बोलिन हुँला ? सम्झिल्याउँदा अहिले पनि आफूलाई मौन नै पाउँछु । अहिले पनि मसँग यी प्रश्नहरुको जवाफ छैन ।
प्रिय पाठक, मौनता मेरो रोजाइँ पनि हो । म चाहन्छु, म चुप रहेरै सबैकुरा व्यक्त भइ जाउन् । सुन्नेले मौनतामार्फत नै मेरा सबै कुरा सुनोस् । बुझ्नेले मौनतामार्फत नै मेरा सबै कुरा बुझोस् । मौनता मलाई यति प्यारो छ कि राति सुत्दा पनि घडीको कर्कश आवाज बन्द गर्न ब्याट्री निकालिदिन्छु । मलाई लाग्छ, मूर्त÷अमूर्त कुनैपनि कुराको ‘एक्स्ट्रीम ब्युटी’ (सर्वोच्च सौन्दर्य) उसको मौनतामै झल्कन्छ । जस्तैः बुद्ध मलाई असाध्यै सुन्दर लागिदिन्छन् सधैं किनकि मैले उनलाई जहिल्यै मौन देखेको छु । मेरो झ्यालबाहिरको ऊ त्यो रुख (जसका पातलाई हावाले अहिले सुस्त–सुस्त हल्लाइराखेको छ) पनि मलाई सुन्दर लाग्छ । भित्ताको यो क्यालेण्डर पनि मलाई सुन्दर लाग्छ, यद्यपि हामी प्रत्येक दिन संवाद गर्छौं । मलाई मेरी प्रेमिका पनि मौन बसेकै बेलामा सबैभन्दा सुन्दर लाग्छिन् । शब्दहरु पनि मलाई असाध्यै सुन्दर लाग्छन् । कतिबेला थाहा छ ? जतिबेला शब्दहरु विल्कुल मौन बसिदिन्छन् ।
तर, त्यो वर्षको होलीमा मौन बसेकोमा भने मलाई पछूतो छ । म बोलिदिएको भए आज मेरो जिन्दगीको रङ अर्कै हुन सक्थ्यो । म बोलिदिएको भए सायद मेरा होलीहरु यतिविधि बेरङ हुने थिएनन् । जब–जब होली आउँछ, उसको त्यो प्रश्न ममाथि घन बनेर बर्सन्छ र घाइते बनाउँछ । जब–जब होली आउँछ, आफ्नै मौनताको चित्कारले म भयभीत रहन्छु ।
जिन्दगीमा ‘रिवाइन्ड’ भन्ने ‘अप्सन’ हुँदो हो त म पुनः त्यही होलीमा फर्किने थिएँ र उसलाई मेरो हातमा लतपतिएको रङले रङ्गाइदिने थिएँ । सुस्तरी छोइदिने थिएँ उसका गाला र जिइदिने थिएँ एउटा सपना । पोतिदिने थिएँ उसको निधार मेरो हत्केलामा च्यापिएका रङहरुले । तर, अफसोस, मेरो मौनताले ती रङहरुलाई रंगिने मौकै दिएन ।
हेलिकप्टर ल्याण्ड हुने क्रम जारी छ, प्रिय पाठक ।
त्यसताकै मौनता मेरो पहिचान र प्रतिष्ठा दुवै बनिसकेको थियो । थाहै नपाई मेरो जिन्दगीको हिस्सा बनिसकेको रहेछ मौनता । पहिचान यसकारण कि चिन्नेहरुले मलाई ‘साइलेन्ट ब्वाय’ भनेर चिन्थे । प्रतिष्ठा यसकारण कि जो जति बढी साइलेन्ट ऊ उति नै बढी ज्ञानी भन्ने मान्यता हामी कहाँ व्याप्त छ । विद्यार्थीहरु मेरो मौनताबाट दिक्क हुन्थे, त्यसैले मेरा धेरै थोरै साथीहरु थिए । शिक्षकहरुले भने मेरो मौनताको तारिफ गर्थे । विद्यार्थी होस् या शिक्षक सबै मेरो मौनतासँग परिचित भने अवश्य थिए । जति नै मौन किन नहोस्, मौन बस्ने मान्छेको पनि त दिल हुन्छ ! दिल कहाँ मौन बस्दो रहेछ र ! दिल त आफ्नै लयमा धड्किरहदो रहेछ । जब मैले पहिलोपटक उसलाई देखें, मैले मेरो दिल धड्केको सुनें । लाग्यो, उसैलाई देखेर निस्केको आवाज हो यो । जो जति नै मौन किन नहोस्, मौन बस्ने मान्छेका पनि त भावना हुन्छन् । भलै ती अनुभूतिलाई ऊ शब्दद्वारा व्यक्त गर्न असमर्थ हुन्छ ।
९ कक्षासम्म अन्तै पढी १० कक्षामा ट्रान्सफर भएर आएकी थिई ऊ । कक्षामा मात्रै होइन मेरो दिलमा पनि ट्रान्स्फर भएकी थिई ऊ ।
मैले मेरो दिल धड्केको सुन्न थालेको वर्ष दिन भइसकेको थियो । त्यसदिन मैले उसको आवाज पनि सुने । म बेञ्चमा एक्लै बसिरहेका बखत उसले सोधेकी थिई, “होली नखेल्ने तिमी ?” ऊ मेरो आँखा अगाडि नै थिई । ठीक मेरो सामुन्ने । फुट्ला झै धड्किरहेको थियो मेरो मुटु । सासको रफ्तारको नियन्त्रण गुमाइरहेको थिएँ मैले । अजस्र बल बटुलेर मैले उसको मुहारमा हेर्न खोजे । तर, उसको सौन्दर्यको तेजका अगाडि मेरो नजर टिक्न सकेन । अनायासै भुइँमा गाडिए मेरा आँखा । मैले देखें, हातभरी अबीर थियो उसको । सेतो कुर्ता सुरुवालमा सजिएकी थिई ऊ । हरियो, पहेलो, रातो रङले पोतिएकी थिई । कपाल असरल्ल छाडेकी । उसका सुनकेशरी कपालमा थरिथरिका रङ अल्झिएका थिए । यसै त रंगिन देखिने ऊ, त्यस दिन झन् रंगिन देखिएकी थिई । म मौन बसेको देखेर उसले पुनः सोधी, “रङ नलाउने तिमीले ?” रङ त मेरा हातमा पनि थियो । उसैलाई नै लगाइदिन्छु भनेर ल्याएको । अजस्र बटुलेरै मैले बोल्न खोजें । तर, अहँ, मेरो मुखबाट केही निस्केन, फगत हावाबाहेक ! भन्न मन त थियो कि म तिम्रै रङमा रंगिन चाहन्छु । तर, म मूर्तिवत उभिइरहें । बोल्न नसके पनि मेरा हत्केलामा च्यापिएको रङले जब मैले उसलाई रंगाउन खोजें, ऊ त्यहाँबाट गइसकेकी थिई ।
प्रिय पाठक, एस.एल.सी. परीक्षाको अन्तिम दिन थियो त्यो । त्यसपछि हामी कहिल्यै भेटिएनौं ।